FAAHFAAHIN: Dhimasho & Dhaawac ka dhalatay iska horimaadkii Boosaaso.
BOOSAASO(P-TIMES) – Hal askari oo katirsan ciidamada PSFta ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawac iska horimaad ku dhexmaray magaalada Bosaaso ciidamo ka amar qaara wasiirka maaliyada Puntland Xasan Shire Abgaal iyo ciidamo fadhiyay saldhiga ay PSFta ku leeyihiin dhanka bari ee magaalada Bosaaso.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii wasiirka iyo ciidamadii la socday ay isku dayeen in ay ka gudbaan bar kaantarool oo utaalay ciiddamada PFSf loogana leexdo dhanka madaxtooyada Bosaaso.
Goobtan ayaa inta badan gaadiika isticmaala wadada gasha xarunta ciidamada PSFta waxa ay uga leexdaan waddo kale oo ku dhaw goobta ina aan lagaari ilinka hore ee xarunta.
Ciidamada PSFta ee ilaalada ka ahaa goobta ayaa diiday in ay gudbaan ciidamada ilaalada u ahaa wasiirka maaliyada Puntland, waxaan lagu amray ciidamada wasiirka in ay maraan waddada kale ee gaadiidku isticmaalo.
Isku dhacan ayaa ku soo beegmay xili uu madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni uu ku suganaa madaxtooyada Bosaaso halkaas oo uu kula shirayay wasiiradii ka socda DFS ee shalay soo gaaray magaalada.
Ma aha markii ugu horaysay oo sidan oo kale ah ay ciidamo isku rasaaseeyaan gudaha magaalada Bosaaso, balse Jun 27, 2016kii ayay ahayd markii israsaaseen noocan oo kale ah oo dhexmartay taliyihii ciidamada Boooslika Puntland Cabdirisaaq Afgaduud iyo taliye kuxigeenkii ciidamada birmadka, iska horimaadkaas oo uuna ku dhaawacmay wasiirkii amniga ee xiligaasi Cabdi Cali Xirsi Cali Qarjab.